Eoropa atsimo atsinanana, Rosia: Ady, Fandriampahalemana ary tantara ifampizarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2008 21:28 GMT
Vladikavkaz renivohitry Ossetia Avaratra any Rosia, nametraka a baoritra kisarintsoratra amin'ny teny Rosiana izay ho sarotra tanterahina any Kaokazy avaratra ny mpampiasa ny LJ alan-tskhurbaev:
Kosovo an'i Serbia!
Raha mitaha amin'i Ossetia atsimo faritra miendaka amin'i Georgia, izay iheveran'ny mpitarika ao fa fanombohan-javatra iny fahaleovantenan'i Kosovo iny, dia nanamarika io domberina io (RUS) ny tonian'ny ivon-toerana amin'ny fanaovan-gazety Oleg Panfilov – mpampiasa ny LJ oleg_panfilov:
Tsy hisy ve ny fizarana faharoa manao hoe -” Ossetia atsimo an'i Georgia”?
Ary dia namaly ilay mpampiasa ny LJ Alan_tskhurbaev:
Satria moa mivantana amiko namoaka ny kisarintsoratra ny fanontaniana, dia ambarako ny hevitro manokana – Tsy an'i Georgia i Ossetia atsimo tahaka ny tsy maha an'i Serbia an'i Kosovo. ary eto [Ossetia avaratra], dia tsy afa-manoratra izany eny amin'ny rindri-trano na oviana na oviana ianao – mahafantatra izany avokoa angamba ny rehetra.
Tafintohina teo anoloan'ny bokintantara navoakan'ny foibe momba ny demokrasia sy ny fampihavanana ao Eoropa atsimo atsinanana (CDRSEE): ” boky mampianatra ny fandriampahalemana, ” hoy ny fanoritany azy. Toy izao ny heviny (RUS) momba ity tetikasa ity:
[…] Sixteen historians from various corners of the Balkans have developed the region's joint history textbook.The essence is simple. Albanian history textbooks teach that if all other peoples disappear from the earth, Albanian nation will continue to flourish. In Greece, high school students are being taught that “the fall of Constantinople” took place in 1453, while their Turkish counterparts learn about the “liberation of Istanbul.” Students from Skopje, Belgrade and Sofia get to know the history of the “liberation from the Turkish yoke,” while in Ankara they study the “dramatic and unfair war that put an end to the Great Ottoman Empire.”
[… ] Mpahay tantara 16 avy amin'ny lafivalon'i Balkans no namolavola ity tantara iraisan'ny faritra ity
Tsotra ny antony. Ny boky tantara albaney dia mampianatra fa na dia manjavona avokoa aza ny vahoaka manerantany, dia mbola hiroborobo kosa ny firenena albaney. Any Gresy, ampianarana amin'ny mpianatra any amin'ny lisea fa ” lavo i Constantinople” tamin'ny taona 1453, nefa ny an'ny Tiorka indray milaza ny “Fanafahana an'i Istanbul.” Ny fahalalan'ny mpianatra any Skopje, Belgrade ary Sofia ny tantara dia hoe “fanafahana amin'ny ziogan'ny Tiorka”, nefa any Ankara ny ianarana dia hoe” ady nampalahelo sy tsy rariny nandrodanana ny fanjakana Ottoman lehibe.”
Mazava loatra fa maro araka ny isan'ny firenena ao amin'ny faritry Balkan ny isan'ny fomba fijery ny tantara balkanika. Samy mitady ny anton'ny zavamisy ankehitriny ny vondrona tsirairay ary mitady fandresen-dahatra ho azy hanandratany ny tarigetram-pireneny. Mino i Kosovo fa maro ny fandresendahatra hanohanany ny fahaleovantenany. Vontom-pinoana amin'ny mifanohitra amin'izany kosa i Belgrade. Samy manana ny fomba fijeriny amin'ny lasany avy ny firenena tsirairay fa tsy dia liana loatra hitady izay fomba iaraha-monina amin'izao fotoana izao.
Ary efa nitranga tamiko … izany, angamba, tokony hitsahatra ny hanoratra ny tantara manokana ho azy indray ny tao anatin'ny repoblika sovietika taloha ka hamoaka zavatra niaraha-nidinika.
Nanampy toy izao ny mpampiasa ny LJ sebtinos hamaliana ny mpamaky iray:
Tsara vintana aho fa nianatra an-tsekoly tamina firenena efatra samihafa: URSS, Rosia, Okiraina ary Lafrantsa. Tena samihafa tanteraka ny fomba fijery. Tsy dia tsara loatra raha iray monja ny tantaran'izao tontolo izao, fa ny vondron'olona na vondrom-pirenena [ dia tsy manana hevitra iraisana amin'io. ]
Nandefa mailaka ho an'olona maro, ao amin'ny ru_politics LJ, ny teny fampidirana ao amin'ny boky tantara nosoratany i Sebtinos, indreto eo ambany misy setriny roa nosoratan'ny mpamaky (RUS):
Tsy tsara ho an'ny manampahaizana manampahefana [ ho an'ny firenena tsirairay] ny tantara iraisana. Manjary sarotra ahodin-doha [ny mponina]. ary ny ohatra noraisinao dia naorin'ny vondrona Eoropeana, fa tsy Albania na Torkia.
Mazava loatra fa mbola tsy namaky io boky io aho, saingy mampiahiahy ahy ny fomba fanoratra [ izay mandamina sy mampitony tafahoatra]. Satria manko nodiana fanina avokoa izay nampiteraka adihevitra rehetra.
Tsy maintsy resahina avokoa anefa ny lohahevitra nampisahotaka rehetra.
Tantaran'ny Albania farany
19 Janoary 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana